Fampahafantaran’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta ny fandaharan ‘asa ankapoben’ny fanjakana teto amin’ny Antenimierandoholona – Sénat de Madagascar
June 29, 2018 Landivola CATUCIA
Araka ny voalaza ao amin’ny Lalampanorenana dia manana 30 andro ny Governemanta manolotra sy mampahafantatra eny amin’ny Fahefana Mpanao Lalàna ny Fandaharan’asa Ankapoben’ny Fanjakana na PGE “Politique Générale de l’Etat” ka ny Alakamisy 28 jiona 2018 no nanatanterahan’ ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta NTSAY Christian izay notronin’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta an’ izany fandaharan’asa izany teo anivon’ny Antenimierandoholona.
Lohahevitra 3 lehibe no nivoitra tamin’izany Programan’asan’ny Governemanta izany izay ho entina hampandrosoana ny Firenena sy hamahana ny krizy misy amin’izao fotoana izao. Anisan’izany ny momba ny fifidianana, ny filaminam-bahoaka sy ny fandriampahalemana ary ny fitantanan-draharaham-panjakana.
Nisongadina tamin’izany koa ny fanohizana ny Drafi-pirenena ho amin’ny Fampandrosoana na ny PND, ny fanaraha-maso akaiky ny fampiasana ny Tetibolam-panjakana, ny tsy hisian’ny fahatapahan-jiro intsony, ny famerenana indray ny takelaka miloko mena mba hisorohana ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ho amin’ny tombotsoa manonkana ary ny fanohizana ny ady amin’ny kolikoly.
Nanambaran’ ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta fa ny fifanomezan-tanana miaraka no ahafahana manatanteraka antsakany sy andavany izany fandaharan’asa izany.
Niompana tamin’ny fifidianana moa ny ankamaroan’ny fanontaniana izay napetrakin’ireo Loholona nandritra io fotoana io, fanehoan-kevitra izay mba hisian’ny fifidianana madio, malalaka ary mangarahara, tao koa ny fanontaniana momba tetibola izay ho entina hanomanana sy hanatanterahana izany fifidianana izany.